M/weyne Faroole oo qaabilay wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya. – Radio Daljir
Seteembar 12, 2009 12:00 b 0
Garowe, Sept 12 – Waxaa maanta booqasho uga bilaabatay Puntland wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya Axmed Ould-Cabdalla. Kulan wadatashi ah ayaa Md. Cabdalla uu la yeeshay M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole, iyo xubno ka tirsan golayaasha dawlada Puntland.
Qodobada laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa xaalda siyaasadeed ee Somaliya, adkaynta xiriirka Puntland iyo Qaramada Midoobay, iyo xal ka gaarida siyaasada cakiran ee Somaliya.
M/weyne Faroole ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay booqashada Md. Cabdalla, tibaaxayna in safarkiisu uu wado fiican u noqon doono adkaynta iskaashi dhexmara Puntland iyo Qaramada Midoobay.
M/weyne Faroole oo ka hadlay is-maandhaafka siyaasadeed ee ka curtay Somaliland ayaa ugu baaqay garabayada ku loolamaya siyaasada Somaliland in wadahadal iyo is-faham siyaasadeed lagu dayo muranka siyaasadeed, kana digay in xabad lagu xaliyo.
M/weyne Faroole ayaa xusay xiriirka u dhexeeya Puntalnd iyo dawlada federaalka ah ee Somaliya oo uu sheegay in uu wanaagsan yahay.
Md. Cabdalla ayaa sheegay in uu ku faraxsan yihiin imaantinka Puntland, kana mahadceliyey soo dhawaybta uu kala kulmay madaxda Puntland.
Waxaa uu sheegay in safarkani yahay kiisii 2-aad ee uu ku yimaado Puntland, sheegayna in Qaramada Midoobay ay taageersan tahay midnimada Somaliya.
Waxaa uu sheegay in xafiiskiisu uu ku dadaali doono xoojina xiriirka wada shaqayneed ee u dhexeeya QM iyo Puntland.
Md. Cabdalla ayaa safar ku soo maray Somaliland, wadahadalo la yeeshay madaxda dawlada iyo kuwa axsaabta mucaaradka, iskuna dayey in uu isu soo dhaweeyo labada dhinac, balse sida uu sheegay aanu ku guulaysan.